मलेसियामा हराएको छोराको अनुहारबाट रगत बगिरहेको फोटो फेसबुकमा आएपछि … – पुरा पढ्नुहोस्……
मलेसियामा हराएको छोराको अनुहारबाट रगत बगिरहेको फोटो फेसबुकमा आएपछि …
सर्लाही । सर्लाहीको मुर्तियाकी शोभा सुनुवारको मोवाइलमा गएको माघ ८ गते राती घण्टी बज्यो । फोन दुवईमा रहेका सौतेनी छोरा विजयको थियो ।
विजयले आमालाई फेसबुकमा रामजी दाइको अनुहारबाट रगत बगिरहेको फोटो फेसबुकमा देखेको खबर सुनाए । विजयले रामजीलाई कुटेर नालिमा फालिएको बेला साथीहरुले भेटेर उनीहरुकै कोठामा लगेर राखेको पनि सुनाए ।
४ वर्षदेखि हराइरहेका छोरा रामजीका बारेमा शोभा खबर पर्खिरहनुभएको थियो । तर विजयले सुनाएको जस्तो होइन । छोरा सकुशल छ भन्ने समाचार पर्खिएकी शोभाले सोच्दै नसोचेको खबर सुन्नुपर्‍यो ।
शोभाका श्रीमानले दुई वटा बिहे गरे । श्रीमान् कान्छी श्रीमतीसँग बस्न थालेपछि शोभाले एक जना छोरासहित ६ जनाको परिवार आफैं सम्हाल्नुभयो ।
घर चलाउने पैसाको जोहो गर्न शोभा भारत जानुभयो । भारतमा घरेलु कामदारका रुपमा काम गर्ने शोभाको पैसाले घर खर्च त चल्थ्यो तर एक पैसा बच्दैनथ्यो ।
त्यसैले कमाएर पैसा बचाउन छोरा रामजी मलेसिया जानुभयो । ८ वर्ष अघि मलेसिया पुगेका रामजीले पनि कमाउन सक्नुभएन ।
काम र कमाई राम्रो नभएकाले कमाउने नसकेको हो कि अरु नै कारणले हो भन्ने परिवारका कसैलाई थाहा छैन । जाँदा लिएको एक लाख ६० हजार रुपैयाँ २ वर्षमा एक पैसा पनि घटाउन सक्नुभएन रामजीले ।
कमाउन नसकेर होला भनेर शोभाले छोरालाई घर फर्किनु भन्नुभयो । रामजीले पनि केही समयमा फर्किहाल्छु नि भन्ने उत्तर मात्रै दिनुभयो । तर फर्किनुभएन । बरु फोन गर्नै छोड्नुभयो ।
रामजीका तीन जना छोराछोरी । बुवा मलेसिया जाने बेला ९ वर्षकी रहेकी जेठी छोरी अमृता अहिले १७ वर्षकी पुगिन् ।
उनले फेसबुक खोलेर बुवालाई पनि साथी बनाएकी थिइन् । बाबु छोरीको गफ हुन्थ्यो फेसबुकमा । तर फोन गर्न छोडेपछि रामजीले फेसबुक पनि बन्द गर्नुभयो । ‘पहिला गफ गर्थें, २ वर्षपछि उसको नाम हालेर खोज्दा पनि नभेटिने भएछ । उसले बन्द गर्‍यो भने त्यस्तो हुन्छ रे’ शोभाले भन्नुभयो ।
शोभाका २ वर्ष छोराको फोन आउने बाटो हेरेरै बिते । २ वर्षपछि रामजीले फोन गर्नुभयो । त्यतिबेला शोभा भारतमै हुनुहुन्थ्यो । रामजीले आफूले गर्दै गरेको काम छोडेर भागेर काम गरेको सुनाउनुभयो आमालाई ।
‘भागेकाले मसँग अहिले कुनै कागजपत्र छैन भनेको थियो’ ४ वर्ष अघि छोरासँग भएका कुरा सुनाउँदै शोभाले भन्नुभयो ‘उसले घर फर्किने पैसा छैन भन्दै ६० हजार रुपैयाँ पठाइदिनुभयो भने घर फर्किन्छु पनि भन्यो ।’
छोरा हराएपछि आत्तिएको शोभाको मन केही शान्त भयो । घर आउन खोजेको छ भनेर उहाँले ३५ हजार रुपैयाँ भारु पठाइदिनुभयो । पैसा पाएपछि रामजीले आमालाई के ल्याइदिउँ भनेर पनि सोध्नुभयो । तर शोभाले परिवार तितर बितर हुन लागेको भन्दै आफूलाई केही नचाहिने भन्दै छिट्टै घर आउन भन्नुभयो ।
रामजीले ‘ल हुन्छ’ भन्नुभएको थियो । तर त्यसो भनेको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि उहाँ घर फर्किनुभएको छैन ।
उमेर ढल्किँदै गएपछि शोभाले अर्काको घरमा काम गर्न सक्नुभएन । उहाँ घर फर्किनुभयो । तर घर चलाउने कसै न कसैले त काम गर्नै पर्ने बाध्यता थियो शोभाको परिवारमा । त्यसैले रामजीकी श्रीमती देवी आफैं अहिले भारत जानुभएको छ ।
फर्किन्छु भनेर पैसा मगाएका रामजी हराएपछि शोभाले भने झैं उहाँको परिवार तितरबितर भएको छ । बुहारी काम गर्न भारत गएको डेढ वर्ष भयो । नाती अमिन मावलमा बसेर पढ्छन् । अहिले त घरमा शोभा र नातिनीहरु अमृता र अरुणा मात्रै छन् ।
एउटा मात्रै छोरो त्यो पनि विदेशबाट नफर्किएपछि तनावमा परेकी शोभाको भोक तिर्खा हराएको छ, माघ ८ गते सौतेनी छोरा विजयले गरेको फोनले । विजयले दाइलाई साथीहरुले राखिदिएका छन् रे त भने तर कहाँको साथीले राखेका हुन, अहिले अवस्था कस्तो छ परिवारले थाहा पाउन सकेको छैन ।
छोराको अवस्था बुझिदिन आग्रह गर्दै शोभाले सामाजिक परिचालक मार्फत हरिवनमा रहेको सुरक्षित आप्रवासन सूचना तथा परामर्श केन्द्रमा निवेदन दिनुभएको छ ।
तर उहाँका कुनै पनि कागजात नभएकाले खोज्न समस्या भएको केन्द्रका परामर्शकर्ता लालकिशोर भण्डारीले बताउनुभयो । केन्द्रले पनि खोज्न गाह्रो छ भनेपछि शोभासँग अब छोराले आफैंले फोन गर्छ भनेर आश गरेर बस्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन ।
शोभाले छोरालाई चिन्ने उहाँका साथीहरुलाई आफू पर्खिरहेको खबर छोरासम्म पुर्‍याइदिन आग्रह गर्नुभएको छ । दुर्गाप्रसाद भट्टराई, ujyalooline
Prevजब भारतको चर्चित प्रोग्राम ” डी आई डी ” मा हिन्दिमा सोधेको जवाफ सुजन तामाङकाे अामाले नेपाली बाेलेपछि मच्चियाे हंगामा (भिडियो सहित)
Nextचर्को नाराबाजीका साथ झगडा पर्‍यो भुत घर भनिने टिकाथलिमा ! रविलाई फसाउने रणनीति भन्दै (भिडियो सहित )
घट्यो सुनको मुल्य , हेर्नुस तोलामा यति घट्यो…
द भ्याईस का बीजेता सिडी बिजय परिवारसहित एयरपोर्टमा, एयरपोर्टमै राईन् श्रीमती…हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
अमेरिका जाने भए अशोक दर्जी, टंकले बनाईदिए भबिष्य ! (भिडियो सहित)